Manchester City Oo Ku Dooneysa Lacag Aan Caadi Ahayn Gabriel Jesus
HomeWararka CiyaarahaManchester City oo ku Dooneysa lacag aan Caadi ahayn Gabriel Jesus
May 4, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay 40 milyan ginni dul dhigtay weeraryahankeeda Gabriel Jesus ka hor inta uusan furmin suuqan xagaagan.
Iyadoo Citizens ay wali raadineyso labo koob oo Premier League iyo Champions League ah, 25 jirkaan ayaa qaab ciyaareedkiisa ka helay goolka hortiisa waqtiga saxda ah, isagoo dhaliyay todobo jeer lixdii kulan ee ugu dambeysay tartamada oo dhan.
Inkasta oo uu qaab ciyaareedkiisa sare u kacay, haddana mustaqbalka Jesus ee Etihad Stadium ayaa su’aal la geliyay toddobaadyadii u dambeeyay, iyadoo Arsenal la rumaysan yahay inay xagaagan xiiseenayso saxiixa xiddiga reer Brazil.
Sida laga soo xigtay Daily Miror , City waxay ku qiimeysaa Jesus ku dhawaad ​​40 milyan ginni iyo iibka suurtagalka ah ee weeraryahanka ayaa gacan ka geysan doona bixinta dhaqaale lagu shaqaaleysiiyo bartilmaameedka koowaad ee Erling Braut Haaland .
Gunners ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay 35 milyan ginni miiska u saarto Jesus xagaagan, laakiin Citizens ayaa diyaar u ah ugu yaraan 40 milyan ginni hadii ay doonayaan inay iibiyaan da’yarkii hore ee Palmeiras.
Jesus, oo wax ka badan 12 bilood uga harsan tahay qandaraaskiisa Etihad, ayaa diiwaan geliyay 95 gool iyo 46 caawin 232 kulan oo uu u saftay City tartamada oo dhan tan iyo markii uu kooxda ku soo biiray Janaayo 2017.